Romelu Lukaku oo la shaaciyey inuu dhaawac kaga maqnaanayo xulka Belgium kulanka Habeen dambe – Gool FM
(Brussels) 23 Maarso 2019. Romelu Lukaku ayaa seegi doona kulanka isreeb-reebka Euro 2020 ee xulkiisa Belgium uu la leeyahay Cyprus.
Lukaku ayaa dhaawac cagta ah ku seegaya kulanka xulkiisa Belgium uu habeen dambe booqan doono Cyprus sida la xaqiijiyey goordhow.
Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa seegay kulankii kooxdiisa ay guuldarrada kala kulantay naadiga Wolves ee FA Cup-ka iyo kulankii furitaanka isreeb-reebka oo uu xulkiisa Belgium guusha ka gaartay Russia khamiistii maxaa yeelay waa uu dhaacan yahay.
Xiriirka kubadda cagta Belgium ayaa haatan xaqiijiyey in Lukaku laga yaabo inuu sidoo kale dhaawacaas ku seego kulanka ay habeen dambe la leeyihiin Cyprus.
Bayaan ka soo baxay xulka qaranka Belgium oo lagu soo daabacay barta Twitter-ka ayaa u dhignaa: “Romelu Lukaku ayaan noola safri doonin Cyprus subaxnimadaan, maxaa yeelay waxa uu qabaa dhaawac cagta ah, si dhaqso leh u soo kabo Romelu!”.
Weli waxaa la arkaa in 25-sano jirkaan uu taam u noqon doono kulanka soo socda ee ay kooxdiisa Man United gurigeeda kula ciyaari doonto Watford Sabtida soo aaddan.